XOG: Ahlu suna oo Go’aan kama dambeys ah ka gaareysa DF & Xiisada Dh/mareeb | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Ahlu suna oo Go’aan kama dambeys ah ka gaareysa DF &...
XOG: Ahlu suna oo Go’aan kama dambeys ah ka gaareysa DF & Xiisada Dh/mareeb
Warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxaya xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug,iyadoo ciidamadii Dowladda Federaalka ee maanta la geeyay magaalada ay si buuxda ula wareegeen xarumihii loogu talagalay.
Ciidamada Ahlu suna ayaa la soo sheegayaa iney wadaan dhaq dhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan iney dib ugula wareegaan xarumihii markii hore ay ku sugnaayeen oo ay hadda ku sugan ciidanka Booliska iyo nabad sugida isugu jira ee ka socda Dowladda Federaalka.
Waxaa magaalada Dhuusamareeb ka socda kulamo ay leeyihiin Waxgaradka magaalada,Hoggaanka Ahlu suna iyo Mas’uuliyiinta Dowladda Federaalka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb,kuwaasi oo lagu qaboojinayo Xiisada iminka ka dhex aloosan Ahlu suna iyo Dowladda Federaalka.
Diyaarado sida ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya ayaa maanta la geeyay magaalada Dhuusamareeb,kuwaasi oo loogu talagalay iney sugaan amniga xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta Galmudug.
Hoggaanka Ahlu suna Waljameeca ayaa u muuqa kuwo ku gadsoomay heshiiskii dhowrka qodob ka koobnaa ee ay la galeen Dowladda Federaalka Soomaaliya,waxayna ilaa iyo hadda ka biyo diidan yihiin in ciidamada ahlu suna gabi ahaanba la baabi’iyo laguna biiriyo Dowladda Federaalka.